Aga m amalite azụmaahịa azụmaahịa
Kedu ihe ị ga - enweta mgbe ị gwakọtara ọnụ ọgụgụ dị elu nke enweghị ọrụ na ndị gụrụ nnukwu akwụkwọ (ụfọdụ na - asị na agụghị akwụkwọ) ọha mmadụ? N'ezie, ndị ọkachamara. Ọtụtụ n'ime ha. Ka emechara, ma ọ bụrụ na ị na na na na na na na na na na na ahịa nke 25 afọ ebe ị nwere ihu ọma iji nwere ọrụ gị kwụọ ụgwọ maka ị na-a "nwe nke azụmahịa nchịkwa" tupu ha akwụsị ịkwụ gị kpam kpam… onye ka mma na-agba ọsọ a ahịa ike !
E nwere ihe a na-agba ọsọ egwuregwu na gị n'ụlọnga n'akụkụ nke azụmahịa – ya bụ, outsourced, ndị na-abụghị ndị ụlọọrụ ụwa nke ahịa ọkachamara na ihe ọ bụla ike. The egwuregwu bụ nke a: mgbe ọ bụla e nwere a layoff, anyị na-enweta ihe ndị asọmpi. Ma, ebe ọ bụ na ọ nweghị onye na-akwado azụmaahịa ka m, enwere m ezigbo ịkatọ onwe m mgbe ọtụtụ mmadụ na-ele shingle nke aka ha.
Gịnị bụ nsogbu? Ahụmahụ. Na inwe azụmaahịa, nke ahụ abụghị, n'ịzụ ahịa. O nwere ike ịbụ na ị bara ezigbo uru dị ka onye na-ese ihe, onye edemede, ma ọ bụ onye na-ahụ maka mgbasa ozi na nzukọ gị gara aga. Ma ahụmịhe ahụ na-akwadebe gị maka ịmịpụta nnweta. Ugbu a n’ahịa nke aka gị, enwere nsogbu ọhụụ ị ga-eche ihu. Ma obughi nani ihe doro anya: ịza ajụjụ, ụtụ, HR, ahịa, wdg. Ọbụna n'ime ọzụzụ ọzụzụ, ọrụ onye ndụmọdụ ahụ dị iche na nke ọkachamara ụlọ. Onye ndụmọdụ ga-amata nsogbu ndị ahụ ma chepụta azịza ogologo oge tupu ha amalite ime atụmatụ ahụ. Ọ bụ ndụmọdụ a dị elu nke ọtụtụ ndị akpọrọ maka ndị na-ahụ maka ịzụ ahịa na-agbasi mbọ ike ịnapụta, ma ọ bụ na-eleghara anya kpamkpam.
Gịnịzi bụ azịza ya? Anyi kwesiri igbako, ndi oru ahia, zere ndi a na abia na echiche uche efu? Ndi a ọkachamara "ahịa ọkachamara" aha kwesịrị ịdị? Ma ọ bụ enwere ike ịhazi usoro ihe omume njem maka ndị na-agba mbọ bido ahia ahia?
N'ọtụtụ ụzọ, usoro ihe omume njem ahụ adịworị. Ọ chọrọ naanị otu ịdị umeala n'obi: gosipụta onwe ya dị ka nke a. Ihe karịrị ole na ole nke ọma-akwanyere ùgwù ahịa ndụmọdụ m maara taa malitere n'okpuru a na-erughị a magburu onwe nkwupụta – na freelancer Ọ bụ ezie na ọ na-adịchaghị mma na kaadị azụmaahịa, onye nwe onwe ya bụ ebe onye ọrụ nka mara ọrụ - ndị na-adịbeghị njikere ife ofufe naanị dabara na usoro nnyefe nke azụmaahịa. Ọ bụghị dị ka ajọ iwe kpọọ onye pere mpe, mana na nkwadebe maka ọrụ ya / nwanyị nwere ike ọ gaghị akwadobe ya fill mana otu ụbọchị, enwere m obi ike, nwere ike.
Bido azụmahịa gị, mana bido na mbido. Na, jisie.
Tags: gị n'ụlọngaejechi akwụkwọOnye njemụlọ ọrụ ahịaahia ahiammalite ahịamalite
Ma eleghị anya, ị gaghị adị mma na nke a